Ogaden News Agency (ONA) – Trump oo Hanjabaad Kulul U Diray Waqooyiga Kuuriya.
Trump oo Hanjabaad Kulul U Diray Waqooyiga Kuuriya.
Posted by ONA Admin	/ November 9, 2017
Donald Trump Madaxweynaha Mareykanka oo khudbad ka jeediyay baarlamaanka dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa ugu baaqay hoggaamiyaha Kuuriyada Woqooyi in uu ka laabto hammigiisa ah inuu sameysto gantaalada iyo hubka Nuclear ka ah.
Trump ayaa ammaan u jeediyay Kuuriyada Koonfureed, waxaana uu ku bogaadiyay horumarka iyo sida ay dalkaasi uu uga duwanyahay waxa uu ugu yeedhay dal xabsi ah oo uu ula jeedo Kuuriyada Waqooyi, wuxuuna intaasi kudaray in ay tahay in wado sax ah lagu hogaamiyo Kuuriyada Waqooyi.
Trump ayaa madaxweynaha xukuumadda Pyonyang Kim Jong Un uga digay in hubka uu horumarinayo uu khatar u kenayo dalkiisa, waxaan uu intaa ku daray in caalamka uusan marnaba u dulqaadan doonin ficilada dowladda Kuuriyada waqooyi.
Waxaa lagu wadaa Donald Trump inuu usii gudbo dalka Shiinaha, balse Mr Trump waxaa uu baajiyay Safar uu ku tegi lahaa goob ka caagan milateriga ceriyaamo awgeed. Trump ayaa socdaal qaadan doona 11 maalmood waxaa uu ku marayaa qaar kamid ah wadamada dhaca Qaaradda Asia, isagoo kulamo uu la qaadan doono madax kaladuwan.